Sawir hore oo Madasha ah
Waxaa socota qabanqaabada Madasha Madaxda Dowladaha Gobollada iyo Dowladda Federaalka. Horeyba wey u dhici jireen kulammadani. Inta badan Muqdisho ayay ka dhici jireen. Sidoo kale Garowe iyo Kismaayo waa lagu qabtay.
Laakiin middan hadda la qabanqaabinayaa wey ka duwan tahay, kana xasaasi san tahay kuwii hore. Cirka ayaa kicin doorasho oo billow ahi ku jiraa, inkasta oo aan wakhti ka harin xilligii in roobku curto la sugayay.
Ajendaha ugu muhiimsan ee Madasha horyaalla waa doorashada 2016 iyo habka loo maamulayo.
Markii ay Warlords ka arrimaneeyn dalka, ama aan iraahdee ay moodayeen in ay ayagu dalka ka Taliyaan, wuxuu ahaa xilli aad u xun. Waxay ahaayeen badankood madax qallafsan. Waxayse Warlords-ku lahaayeen xeer aan qornayn. Niman waxay ahaayeen inta badan taagtooda tallaabsada. Ma haysan ciidan shisheeye oo u dagaallama ama u damaanad qaada damac ay qaar kale u arki karaan sadbursi.
Laakiin, Xarunta Puntland waa Garowe. Marka aad ka baxdo Degmada ugu dhow ee ku soo xigtaa waa Laas Caanood (LA). Bartamaha Laas Caanood (Downtown LA) calanka ka babbanaya bal soo eeg. Puntland iska daaye ma ahan calanka Soomaaliya. Puntland wey baratay si xaqiiqadaas la deriska ah ay ula noolaato.
GalMudug weli waxaan ka sugeynaa in ay tagto oo xarunteeda ay degto kuna shaqeyso. Koofur Galbeed iyo Jubbaland iyaga waxaa ku yaalla xarumo looga duulo caasimadda iyo weliba dalal kale.
Dowlad Goboleed kasta waxaa jira qabaa’il iyo kooxo siyaasadeed oo ka gadoodsan oo ku nool kuna shaqeysta degaannada ay ayadu sheeganeyso. Aniga oo aan isbarbardhig sameyneyn siina dhex galeyn waxaa tusaale iiga filan Khaatumo, Ahlu Sunna iyo Bakool Sare.
Hadda waa laga yaabaa in kooxaha aan sheegay iyo kuwa la mid ah oo aan sidaa u caan bixin si uun loo muquunin karo ama loo duudsin karo. Laakiin ismuquunin iyo duudsi waxa keliya oo ay dallacsiin karaan colaadda, taas oo xalka sii fogeyn karta.
Waxaa ka wanaagsan isu-garaabid, istixgelin iyo is-aqbalaad labada dhinacba ka timaadda. Waa hab dan u ah Soomaali. Ka raqiisan kana dhib yar isxaqiraadda iyo ismuquuninta. Oo aan dhiig ku daadaneyn. Waxa keliya oo ku dhiman karaa waa qab, qabkuna dhiig ma lahan.
Banaadir waxay tahay waxa Gobol yahay. Kama sarreyso, lagamana hoos dhigi karo. Taas macnaheedu ma ahan in qabiil leeyahay caasimadda sida dadka qaar ay ku doodayaan. Qormo aan ku dhiibtay Aragtideyda Muqdisho halkan ayaad ka akhrin kartaa oo aan ku soo lifaaqay.
Xusuusnaada in aan Doon wada saaran nahay. Doonta waxaa la yiraahdaa Soomaaliya. Qof madax ah iyo mid aan ahayn, qof ma jiro qofka kale ka leh. Qof, gobol ama qabiil ay meel doog leh keligood geyn doontaana ma jiraan. Doogga waan wada tegi doonnaa ee inta ka horreysa yaan doontu nala degin ama nala caarin.
Haadaanta kale waa Khatarta Burcadbadeedda. Iska ilaalin ayay rabaan. Doonta in aan ka ilaashanno ayaa waajib ah.
Doonteennu waa ay muuq iyo magac dheer tahay. Naakhuudayaasheeduna ma tiro yara, Soomaali iyo ajnebiba.
Soomaaliya dowladnimadeeda, nabadgelyadeeda, horumarkeeda iyo karaammadeeda waxaa lagula xisaabtamayaa marba Madaxda markaa mas’uulka ka ah. Taariikh loo aayo in aad ka tagtaan ayaad fursad u haysataan.
Fursadda arka oo noogaa faa'iideeya.
Posted by Yusuf Garaad at 13:42:00